ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ Meizu X8 ကို ရောင်းမည် – Myanmar Mobile App
Posted on October 13, 2018 Author Ko Nyi	Comment(0)
မီဇူးက စက်တင်ဘာလမှာ စမတ်ဖုန်း အသစ်များကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ X8 လည်း ပါပါတယ်။ သူဟာ ၂၃၀ ဒေါ်လာသာ တန်ကြေးရှိပါတယ်။ အခုတော့ သူ့ကို ၁၅ ရက်နေ့မှာ ရောင်းချပေးတော့မှာပါ။ 4/64GB ကို ၂၃၀ ဒေါ်လာနဲ့ 6/64GB ကို ၂၅၉ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ 6/128GB ဟာ ၂၈၈ ဒေါ်လာ ကျသင့်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ Specs များကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာ ၆.၂ လက်မ Full HD+ (2220x1080p) Display ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 2.2GHz Octa-Core CPU ပါတဲ့ Qualcomm Snapdragon 710 Chipset မောင်းနှင်ထားပါတယ်။ 4/64GB , 6/64GB , 6/128GB Model များ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
အနောက်ဘက်မှာ 12MP f/1.9 Main Camera နဲ့ 5MP Camera များ ထည့်သွင်းထားပြီး Portrait Photo များကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက် Selfie Camera ကတော့ 20MP ဖြစ်ပါတယ်။ Face AE လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ မျက်နှာဖြင့် ဖုန်းကို Unlock လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည် ပါပါတယ်။ မျက်နှာအာရုံခံ နည်းပညာဟာ AI ပါတဲ့ Flyme OS ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Android Oreo အခြေပြု ဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ထရီက 3210mAh ဖြစ်ပြီး USB-C Port ကို ဖုန်းရဲ့ အောက်ခြေမှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 3.5mm Jack လည်း ပါပါတယ်။ အပြာ၊ အနက်နဲ့ အဖြူရောင်များ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ယခုလ ၁၅ ရကျနမှေ့ာ Meizu X8 ကို ရောငျးမညျ
မီဇူးက စကျတငျဘာလမှာ စမတျဖုနျး အသဈမြားကို ကွညောခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအထဲမှာ X8 လညျး ပါပါတယျ။ သူဟာ ၂၃၀ ဒျေါလာသာ တနျကွေးရှိပါတယျ။ အခုတော့ သူ့ကို ၁၅ ရကျနမှေ့ာ ရောငျးခပြေးတော့မှာပါ။ 4/64GB ကို ၂၃၀ ဒျေါလာနဲ့ 6/64GB ကို ၂၅၉ ဒျေါလာ သတျမှတျထားပါတယျ။ 6/128GB ဟာ ၂၈၈ ဒျေါလာ ကသြငျ့ပါတယျ။
သူ့ရဲ့ Specs မြားကို ပွနျလညျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ သူ့မှာ ၆.၂ လကျမ Full HD+ (2220x1080p) Display ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ 2.2GHz Octa-Core CPU ပါတဲ့ Qualcomm Snapdragon 710 Chipset မောငျးနှငျထားပါတယျ။ 4/64GB , 6/64GB , 6/128GB Model မြား ထုတျလုပျပေးထားပါတယျ။
အနောကျဘကျမှာ 12MP f/1.9 Main Camera နဲ့ 5MP Camera မြား ထညျ့သှငျးထားပွီး Portrait Photo မြားကို ဖနျတီးပေးနိုငျပါတယျ။ အရှဘေ့ကျ Selfie Camera ကတော့ 20MP ဖွဈပါတယျ။ Face AE လို့ အမညျပေးထားတဲ့ မကျြနှာဖွငျ့ ဖုနျးကို Unlock လုပျနိုငျတဲ့ စှမျးရညျ ပါပါတယျ။ မကျြနှာအာရုံခံ နညျးပညာဟာ AI ပါတဲ့ Flyme OS ရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျး ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ Android Oreo အခွပွေု ဖွဈပါတယျ။
ဘကျထရီက 3210mAh ဖွဈပွီး USB-C Port ကို ဖုနျးရဲ့ အောကျခွမှော ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ 3.5mm Jack လညျး ပါပါတယျ။ အပွာ၊ အနကျနဲ့ အဖွူရောငျမြား ထုတျလုပျပေးထားပါတယျ။
Window 10 ကို update လုပ်လိုက်မိလို့ Power Shell ၀င်ပြီး Open Power Shell Windows here လို့ပေါ်နေရင် ဖြေရှင်းနည်း
<Zawgyi> Window 10 ကို update လုပ်လိုက်မိလို့ Power Shell ၀င်ပြီး Open Power Shell Windows here လို့ပေါ်နေရင် ဖြေရှင်းနည်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြောခဲ့သလို error တက်နေရင်တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ reg ဖိုင်လေးကို RUN လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ <Unicode> Window 10 ကို update လုပျလိုကျမိလို့ Power Shell ဝငျပွီး Open Power Shell Windows here လို့ပျေါနရေငျ ဖွရှေငျးနညျးလေးကို တငျပေးလိုကျပါတယျ။ ပွောခဲ့သလို error တကျနရေငျတော့ အောကျမှာပေးထားတဲ့ reg ဖိုငျလေးကို RUN လိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျ အဆငျပွသှေားပါလိမျ့မယျ။ Credit – Ko Than […]
Posted on December 7, 2018 December 7, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)
Zawgyi Version iPhone XS မှာ ကင်မရာနှစ်လုံးနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပေမယ့်လည်းiPhone XR ကတော့ ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့သာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကို အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်းXR ရဲ့ ကင်မရာအရည်အသွေးကိုတော့ လျှော့တွက်လို့မရပါဘူး။ ဒါကိုလည်း အံ့သြစရာတစ်ခုလို့ဆိုရခက်ပါတယ်။ ကင်မရာအရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် အင်ဂျင်နီယာနဲ့ သုတေသနပညာရှင်ပေါင်း၈၀၀ကျော်နဲ့ ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း အရင်နှစ်တွေကတည်းက Appleရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်အရ သိထားပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါ။ အခုပြောမှာကတော့ DxOMark ရဲ့ တင်ပြချက်အသစ်ထဲမှာ Apple ရဲ့ iPhone XR ကင်မရာအရည်အသွေးဟာ ကင်မရာတစ်လုံးတည်းပါတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကြားမှာ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို တွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းပါပဲ။ ဒါ့အပြင် DxOMark ရဲ့ပြောကြားချက်အရ iPhone XR ဟာ သူတို့စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ အမှတ်အများဆုံးရနေခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း မှတ်သားရပြန်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ Google Pixel2ထက်တောင် အနည်းငယ်ကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ DxOMark ရဲ့တွေ့ရှိမှုကတော့ […]
ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး လူတိုင်းဟာမိမိရဲ့ အချက်အလက်တွေလုံခြုံရေး အတွက်စိုးရိမ်ကြရပါတယ်။ သင့်ရဲ့စကားဝှက်တွေ နဲ့အခြားသောအရေးကြီးအချက်အလက်တွေ ခိုးယူခံရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် သင့်ကွန်ပျူတာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အပြောင်းအလဲများကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ Hack ခံရပြီလားဆိုတာကို သိနိုင်မည့်နည်းလမ်းများအား ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုခုမူမမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါက ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါဦးမယ်။ ၁၂. Antivirus Software ကိုပိတ်နေခြင်း သင့်ကွန်ပျူတာမှ Antivirus Software မှာသင်ပိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ အလိုအလျောက်ပိတ်နေပါက သင့်ကွန်ပျူတာ Hack ခံနေရဖို့များပါတယ်။ သူ့ဘာသာသူတော့ပိတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟက်ကာများ ပထမဆုံးပြုလုပ်သောအရာမှာ Anitvirus Software များပိတ်ပစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့မှသာ သင့်ဆီမှ အချက်အလက်များ ကိုခိုးယူနိုင်မှာမို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁. စကားဝှက်အလုပ်မလုပ်ခြင်း သင်ကိုယ်တိုင် သင့်စကားဝှက်ကိုမပြောင်းထားပေမယ့် သင့် account ထဲသို့ဝင်ရောက်သည့်အခါ ၀င်မရဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပါက သင်သတိထားသင့်ပါပြီ။ သင့်ကွန်ပျူတာ Hack ခံနေရနိုင်ချေရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀. […]